गर्विलो इतिहास बोकेका राजनसँग छ : खोटाङ्गेलाई “सम्बृद्धिको स्वाद चखाउने” यस्तो योजना • Janaboli
गर्विलो इतिहास बोकेका राजनसँग छ : खोटाङ्गेलाई “सम्बृद्धिको स्वाद चखाउने” यस्तो योजना
काठमाडौ । खोटाङ्गको प्रदेशसभा (क) मा एउटा यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाली छोरा चुनावी मैदानमा छ । जसले सानै उमेरको छोटो समयमा केन्द्रीय नेतासँगै इतिहास परिवर्तनका लागि पौठेजोरी खेलेको छ । शासकलाई ढाली नयाँ शासन व्यवस्था ल्याउनका लागि रगत बगाएको छ । नेल–जेलको बन्धनमा बसेर काल कोठरीको यातना भोगेको छ । विश्वलाई चकित बनाउदै अनन्त कालसम्म आफ्नो शासन लादीरहेको निरंकुश शासकका बिरुद्ध पहिलो आवाज निकाल्छ । शासककै विरुद्ध बोलेको अभियोगमा मृत्युको मुखमा पुग्नेगरी यातना भोग्छ तर उ पराजित कहिलै हुँदैन । इतिहासमा विजयमा योगदान दिने नामहरुको लिष्टमा आउँछ राजन राई । जो अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट बामगठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको रुपमा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेद््वारको रुपमा खोटाङ्ग प्रदेश सभा क्षेत्र (क) को चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । उनीसँग जनबोली डटकमका सम्पादक इन्द्र आचार्यले लिएको रोचक कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।
खोटाङ्गको चुनावी मैदानमा देखिएको राजन राई को ?
राजन राई नेकपा एमालेको अघिल्लो तहको इमान्दार कार्यकर्ता हो । जसले पार्टीको पक्षमा, जनताको पक्षमा र देशका लागि अहिलेसम्मको सिंगो समय र उर्जाको योगदान दिएको छ । मेरै शब्दबाट सुन्न चाहानुहुन्छ भने गणतन्त्र प्राप्तिका लागि दलिय संघर्ष चलिरहँदा म विद्यार्थी आन्दोलनमा केन्द्रमा थिए । माघ १९ गतेको त्यो कालो कहालिलाग्दो दिन सम्झिन चाहान्छु । सबै त्राहि–त्राही बनेका थिए । अब के हुन्छ ? सबैको मनले प्रश्न गरिरहेको थियो । तर मैले यो शासकको बिरोध नेपाली जनताको पक्षबाट मैले गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय लिए । त्यो बेला तत्कालिन जहानिँया शाह वंशीय शासन विरुद्ध बोल्ने आँट कसैले गरेका थिएनन् । माघ १९ को कालोदिनपछि सम्भवत म नै त्यस्तो पहिलो व्यक्ति हो जसले पहिलोपटक राजाका बिरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छु । पहिलो पटक मैले राजाको विरोधमा भाषण गरेको हो ।
त्यसकै आधारमा मलाई गिरफ्तार गरियो । निर्मम यातना दिइयो । साढे ३ महिना जेल बसे । त्यो कालो दिन अब जनताका लागि समर्पण गरिसकेको छु । त्यो भित्रको वेदना अहिले ओकल्दिन । शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै कुरा गर्दापनि २०४६ सालपछि लामो समय जेल जीवन भोग्ने म पनि एक नेता हो । त्योपनि शासक परिवर्तन, शासन व्यवस्था परिवर्तनकै खातिरको संघर्ष थियो । मुलुक परिवर्तनका लागि सबै दलले गरेको १९ दिने जन–आन्दोलनमा म केन्द्रमा विद्यार्थीको केन्द्रीय आन्दोलन हाँकिरहेको थिए । त्यो जन–आन्दोलनबाट २४० बर्षको तानाशाही शासक फालेर नयाँ शासन व्यवस्था ल्याउन सफल भएका छौ । त्यो आन्दोलनमा विद्यार्थीहरुको तर्फबाट मैले केन्द्रीय आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको थिए ।
संविधान लेखनको कार्यमा जनताको पक्षबाट जनदवाव दिनेदखि सकारात्मक सुझावका जनताका पोका बोकेर केन्द्र धाएको नेता हुँ । विकासका लागि वारम्वार संघर्ष गर्दा टाउँको फुटाउनु परेको त्यो दिन तपाईहरुकै लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा भिडियो र दृष्यहरु छन् । यस हिसाबमा खोटाङ्गको एउटा सामान्य छोरो गाउँदेखि केन्द्रसम्मको संघर्षमा गर्विलो इतिहास बनाउ पुगेको छ । योगदान दिएको छ । म खोटाङ्ग जनताकै लागिपनि एउटा इमान्दार, सच्चा निष्टा बोकेको, क्षमतावान व्यक्तिको रुपमा चित्रित छु । मैले मात्रै भनेको हैन । अब त झण्डै ९० प्रतिशत मतदाताको घरमा घरदैलो कार्यक्रम लिएर उम्मेदवारी घोषणापछि नै पुगिसकेको छु । उहाँहरुले दर्शाउनुभएको म प्रतिको माया र श्रद्धाका आधारमा दावाका साथ भन्न सक्नु । खोटाङ्गका लागि गर्विलो इतिहास बोकेको चुनावी मैदानमा उत्रिएको अब्बल दर्जाको प्रतिस्पर्धी हुँ ।
तपाईहरुको गठबन्धनले अघि सारेका चुनावी एजेण्डा त जनतालाई थाहा भइसकेको छ । खोटाङ्गका लागि तपाईका एजेण्डा के ?
तपाईको सञ्चार माध्यमबाटपनि जानकारी गराउन चाहान्छु । खोटाङ्ग विकासको दृष्टिकोणमा तुलनात्मक हिसाबमा ज्यादै कमजोर छ । कसैले त पूर्वको कालिकोट भनेर चित्रित गरेका छन् । तर कालिकोटका हुम्ला, जुम्लापनि निक्कै विकसित भइसके । तर हामी अझ धेरै पछाडी छौ । त्यसैले मेरो पहिलो एजेण्डा भनेकै विकास निर्माणमा जोड हो । मेरो आधारभूत शर्त नै खोटाङ्गका हरेक स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोड्नु हो । यातायात भएमात्र सबै विकासका मुहान फुट्छन् । त्यसैले बनिरहेको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गराउनका लागि मेरो भूमिका रहनेछ ।
साथै मोटरबाटो निमार्णका सन्र्दभमा मेरो आफ्नै रणनीतिक योजना छ । जस्तै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने रावा खोला र तापखोलाको किनारनै किनार केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जोड्ने मोटर बाटो निर्माण गरेपछि जिल्लाको उत्तरी भागबाट विकासको ढोका खुल्छ । म निर्वाचित भएपछि सुङदेल–दिप्सुङ्ग हुँदै रावाखोलाको किनारै किनार जयरामघाट जोडेर केन्द्रीय सडक सञ्जालमा जनतालाई जोड्ने मोटरबाटो बनाउछु यसैगरी उत्तरी फेदिको तापखोलाको किनारहुँदै रावाखोलामा जोडेर जयरामसम्म पुग्ने अर्को केन्द्रीय सडक सञ्जाल बनाउने योजना छ । म सञ्चारमाध्यममा लोकप्रियताका लागि गर्न नसक्ने सपना मतदातालाई बाँड्दिन । तर अरु जिल्लामा भइरहेको विकास बराबर जिल्लालाई पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
धेरैलाई थाहा छ । पूर्वको पशुपतिनाथ बनेर चिनिने हलेसी महादेवस्थान खोटाङ्गमा छ । यो विश्वकै वौद्ध, हिन्दुहरुका लागि आस्थाको धरोहर हो । यसैगरी हलेसीबाट २ किलोमिटर माथी त्रीधार्मीक आस्थाको धरोहर तुवाचुङ्ग जायजुम क्षेत्र छ । जुन हिन्दु, वौद्ध र किरातीहरुको आस्थाको धरोहर हो । यो किँरातहरुको आदिम सभ्यताको पवित्र भूमीपनि हो । यसलाई विकास, प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धन गरेर विश्वका मानिसहरुलाई खोटाङ्ग घुमाउने योजना छ । यसले जिल्लालाई मात्र हैन । समग्र मुलुककै अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनेछ ।
पूवी पहाडकै उत्कृष्ट बसोवास भएको खोटाङ्गको तत्कालिन सदरमुकाम दिक्तेललाई मुलुककै नमुना नगरी बनाउने विशेष योजना छ । हलेसी आएका पर्यटक एकपटक दिक्तेल बसेरै आउ भन्ने बनाउन सक्ने प्रसस्त सम्भावना देखेको छु । पूर्व पश्चिम लोकमार्ग बनेपछि इलाम देखि विराटनगर, झाप, सुनसरी, धरान धनकुटाका मानिस पहाडी हावा खाँदै काठमाडौ आउन दिक्तेल हुँदै आउने मोटरबाटो प्रयोग गर्नेछन् । केही समय त्यहाँ विताएर जान योग्य दिक्तेल बनाउछु ।
अर्को नेपालीको आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स हो भन्ने गरिन्छ । तर मेरो ठम्याई प्रमुख आधार कृषि नै हो । ३६ प्रतिशत अर्थत्रन्त्रमा कृषिले योगदान गरिरहेको छ । यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ । आफ्नै ठाउँको उत्पादनले खान पुग्ने बनाउनु मेरो लक्ष्य हुने छ । त्यसैले मेरो कृषि सुधारका लागि विशेष योजना लागु हुनेछ । नेपाल जस्तो विकाशोन्मुख देशहरुमापनि प्रतिहेक्टर ८ मेट्रिक टन खाद्यन्न उतपादन हुन्छ भन्ने छ । तर नेपालको दुर्भाग्य अहिले प्रतिहेक्टर जमिनमा २ मेट्रिक टन मात्र खाद्यन्न उत्पादन हुन्छ । तर अब यसलाई हामीले अवशरको रुपमा लिएर सुधार गर्दै कृषिमा ३ गुणा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौ । यसो हुँदा आफ्नै देशको उत्पादनले हामीलाई खान पुग्छ । नगदे बाली विदेशीलाई बेचेर अरु आवश्यकता पुरा गर्ने बन्छौ ।
मलाई लागेका अर्को नेपालमा कृषि विज्ञको रुपमा त्यति दक्ष, विज्ञ र जिम्मेवारी जनशक्ति छैन । सरकारी कृषि विज्ञहरुको विज्ञता र पद बढुवा गराउन जरुरी छ । म त्यो गर्नेछु । माटो अनुसारको कृषि, प्राविधिक कार्यशैली, नगदेबाली र फलफुल उत्पादनमा जोड दिन्छु । सोझो हिसाबमा भनौँ न । सहरबाट विष्कुट र चाउचाउ बोकर आएको ट्रकलाई फर्सी र स्कुस बोकाए पठाउने बनाउछु । चामलसँग पिठो सटाएर खोटाङ्गे जनतालाई विकास र सम्बृद्धिको स्वाद चखाउछु । खोटाङ्ग जलविद्युतको हिसाबलेपनि संबृद्ध भूगोल हो । हाम्रै केही उम्मेदवारहरुको गलत कर्मले वेथीति आएको बुझेको छु । त्यस्तो बद्मासीलाई चिरेर । दक्ष्य र योग्य निर्माण कम्पनीलाई खोलाको जिम्मा दिने । काम नगरेकाहरुलाई कानून बमोजिम कार्वाही गरी लाईसेन्स खारेजीमा लग्ने । सस्तो र छिटो उत्पादन गरेर आफ्नो जिल्ला, प्रदेश र मुलुकलाई पुग्नेगरी उत्पादन गर्दै नजिकै रहेको छिमेकी मुलुक चीनसम्म विद्युत व्यापार गर्ने हैसियतमा जिल्लालाई पुर्याउने दिर्घकालीन लक्ष्य लिएको छु ।
अब चुनावी अंकगणित के छ ?
खोटाङ्ग जिल्ला बामपन्थिहरुको किल्ला हो । इतिहासदेखि हेर्ने हो भने बामपन्थीहरुले नै धेरै पटक बाजी मारेका छन् । २०६४ मा तत्कालिन नेकपा माओवादीले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा बाजी मारेको हो । २०७० मा दुवै क्षेत्रमा एमालेले जित्यो । भर्खरै भएको स्थानीय तहको नतिजा हेर्ने हो भने, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको स्पष्ट दुई तिहाई मत छ । एमाले एक्लैको बहुमत छ । जिससमापनि एमालेकै बहुमत छ । मतको हिसाब गर्ने हो भने, खोटाङ्गमा एमालेको २५ हजार, माओवादी केन्द्रको १७ हजार र कांग्रेसको २१ हजार मत हो । हामी माओवादी एमाले अब एक हौ । यसरी हेर्दा हाम्रो ४२ हजार मत छ कांग्रेको २१ हजार मात्र मत छ । हामी दोब्बर मतले जित्छौ । फेरी बामगठबन्धन र एकीकरणले उत्साहले तटस्थ बसेका मतदाताहरु र लामो समय कांग्रेसमा आस्था राख्ने मतदाताहरुपनि हामी प्रति आकर्षित हुनुभएको छ । धेरै जना हामीसँग आइसक्नुभएको छ । यो सबै अंकगणित केलाउँदा तपाई अन्र्तवार्ता लिने पत्रकार ज्यूले नै हेडलाईन बनाउनुहुने छ । की खोटाङ्गमा बामगठबन्धनको जित पक्का । अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने, म राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा मतदाताले पत्याउन योग्य राजनीतिज्ञ मात्र हैन । मलाई एक कुशल गितकारको रुपमापनि चिन्नुहुन्छ । केही चर्चित गितहरु मेरा कलमले लेखिएका छन् । योपनि प्लस पोईन्ट हो । सबै आधारमा मेरो जित निश्चित छ ।
खोटाङ्ग बामगठबन्धनका उम्मेद्वार :- प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार विशाल भट्टराई (एमाले) बीचमा, प्रदेश सभा (क) सदस्य उम्मेद्वार राजन राई (एमाले) बाँया, प्रदेश सभा (ख) सदस्य उम्मेद्वार रामकुमार राई पासाङ्ग दायाँ तर्फ ।
तपाईको निकटतम प्रतिस्पर्धा त कांग्रेसकै उम्मेदवारसँग होला हैन ?
आँकडाको हिसाबले हाम्रो प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसँग हो । यो हामीले स्वीकारेको कुरा हो । तर खोटाङ्गमा उम्मेदवारका कारण अरु साना दलभन्दापनि कांग्रेस कमजोर बन्ने देखिन्छ । अत्यन्तै फितलो प्रतिस्पर्धीलाई कांग्रेसले उभ्याएको मात्र छ । त्यसैले मेरो प्रतिस्पर्धा कांग्रेसका उम्मेदवारसँग हैन । कांग्रेसका उम्मेद्वार सुवास पोखरेलजीसँग मेरो निकट चिनजान छैन । उहाँ खोटाङ्गका लागि टुरिष्ट उम्मेद्वार हो । काठमाडौ मै घरजम गरेर बस्ने । बालमन्दिरतिर राज्यको लाभको पद लिएर बस्ने । उतै गरिखाने मेसो मिलाएर बसेका मित्र हुन् भन्ने लाग्छ ।
किनकी उनी नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिपनि हैनन् । यहाँ मतदाताले भनेको सुनेको छु । २०५४ सालमा वडामा नै पराजित भएर उनी काठमाडो हिँडेका हुन् । खार्पा गाविसको वडा सदस्यमा उनी पराजित भए । २०६४ सालको संसदीय चुनावमापनि पराजित नै हुन् । पार्टीका केन्द्रका केही पद र पार्टी जिल्लाको चुनावमापनि पराजित भएका व्यक्ति हुन् । उनी स्वयं चै चलाख छु । लोकप्रिय छु भन्दै हिँडेका छन् रे । मतदाताले खिस्सि उढाईरहेको सुन्छु । त्यसैले मैले यतिकुरा थपे ।
भारतमा रेल दुर्घटना २ सय जना यात्रु गम्भीर
पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियलले गरिन यस्तो खुलासा ‘हो, मलाई डोनाल्ड ट्रम्पले चेनले बाध्नेर यौनसम्पर्क गरेका हुन्’
जान्नुहोस् : पुस्तक नै हो सफलताको मन्त्र ! [ सफल शैक्षिक ब्यबसायी शेषराज भट्टराई ]